Izy mivady tsy nahafehy harena - Takila Malagasy
Izy mivady tsy nahafehy harena (Angano)
Nitsidika : 1301
Angano nalaina tao amin'ny http://angano.blaogy.com
Nisy, hono, mpivady izay nahantra aok’izany ka mba hahazoam-bola kely nenti-niady tamin’ny fiainana dia mikapa azo any an’ala rangahy fa ramatoa kosa nikarakara tokantrano.
Indray andro anefa hono, dia nandeha tany anaty ala-kitroka rangahy ka nahita hazobe hafa noho ny hafa. Vao hikapa ilay azo anefa hono rangahy dia niteny ilay hazobe ka nitaraina tamin-drangahy mba tsy hokapaina. Gaga sy natahotra hono rangahy ka lasa nandositra lavitra ka efa lasa lavitra tokoa vao tonga saina ka niverin-dalana. Dia nanandrana hikapa ihany anefa hono rangahy ka niteny tahaka ny teo ihany ilay hazo. Dia nitsahatra tsy nikapa intsony hono rangahy fa nihaino ity hazo sady nanontany hoe:
Fa iza moa ianao no toa hazo mahay miteny, ary nahoana ianao no tsy hokapaiko fa mahantra aho ka tsy maintsy mikarako izay hivelomanay mivady.
Dia namaly ary ilay hazo ka nanao hoe:
- Izaho no mpanjakan’ny ala, ary raha manaiky tsy hikapa ny ala intsony ianao dia homeko fanomezana mahagaga.
Dia gaga sy talanjona hono rangahy ka nianiana fa raha manome fanomezana azy ilay hazo mahagaga dia hitsahatra tsy hikapa ala intsony izy.
Dia hoy hono ilay hazobe namaly:
- Moa va hitanao itsy sahafa itsy, fa nisy sahafa teo anilan’ilay hazo mahagaga. Raiso io ary ento fa hanome anao izay angahatahanao izy.
Dia lasa nody hono rangahy nitondra ity sahafa mahagaga .Teny andalana anefa, dia reraky ny lalana rangahy sady noana aok’izany ka nalainy ity sahafa ka sady nahodiny no noteneniny hoe:
Ry ilay sahafa, ry ilay sahafa omeo sakafo aho fa noana aok’izany.
Dia nihodiana mafy tokoa ary ity sahafa fa inona hoy ianareo fa indreny sakafo tsara sy mafana no teo ambonin’ilay sahafa.
Dia nihinana rangahy ka rehefa voky dia nody ampifaliana aok’izany. Rehefa tonga tao an-trano ary rangahy dia nanome ilay sahafa an-dramatoa vadiny sady nitantara ny zava-nitranga. Dia nisakafo ihany koa hono ramatoa vadiny.
Indray andro anefa hono ramatoa vadiny dia niangavy tamin-drangahy sady niteny hoe:
- Hono hoy aho rangahy,jereonao ity sahafa fa sahafa mahagaga ,manome sakafo ampy antsika mivady kanefa toa ratsy tarehy ity izy. Raha vao maraina aho rangahy dia hanatona mpandrafitra mba hanalama ity sahafa ity.
Dia lasa tokoa hono ramatoa ka nantona ny mpandrafitra ka rehefa nifanaraka teo hono izy ireo dia lasa ramatoa sady nandrara fatratra azy tsy hanodina ity sahafa. Kanefa inona hoy ianareo fa tsy vao lasa ramatoa dia nahodiny ity sahafa fa hoy izy mantsy. "Nahoana ramatoa iny no nandrara ahy tsy hanodina ny sahafa?" Rehefa nihodina anefa ny sahafa nanome sakafo betsaka ka gaga izy.
Rehafa tonga ary i ramatoa haka ity sahafa, dia sahafa hafa nolamainy hono no nomeny azy fa tsy ilay sahafa mahagaga. Ka rehefa tonga tany an-trano ramatoa ka nanodina ity sahafa dia tsy nisy na inona na inona nitranga ka gaga sy talanjona.
Rehefa tongta koa hono rangahy dia nolazainy azy ny zava-nitranga ka hoy rangahy.
- Angamba tsy tia alamaina ilay sahafa, ramatoa.
Ny ampitso vao maraina hono rangahy dia nankany an’ala ka nanatona ilay hazo sady niteny hoe:
- Tsy mamoaka sakafo intsony ilay sahafa ry hazo mahagaga ka inona no tokony hatao fa noana tsy misy hoatr’izany izahay mivady.
Dia nomeny ondrilahy hono rangahy ka nolazainy fa ondry mahagaga ity ondrilahy satria rehefa ampandihizina dia mamoaka vola.
Teny an-dalana ihany ary rangahy dia nanandrana nampandihy ity ondro ka hoy izy:
- Ry ondrilahy,ry ondrilahy mandihiza.
Dia nandihy ary ity ondrilahy ka rehefa mahazo vola betsaka teo rangahy dia nody ka nividy sakafo betsaka ho azy mivady.
Rehefa ela anefa ny ela dia nalahelo mafy hono ramatoa ka nilaza hoe:
- Endrey ondrilahy mahagaga toa ity moa rangaha ka irery. Andeha isika hitady ondrivavy ho sakaizany. Dia nankany amin’ny mpanakarena hono ramatoa nitondra ity ondry kanefa tsy nety nampindrana ondrivavy hono ilay mpanakarena fa nanaiky kosa raha apetraka any aminy ilay ondrilahy. Dia nanaiky hono ramatoa, ka rehefa nifanaraka hono izy ireo dia lasa ramatoa rehefa avy nandrara fatratra an’ilay rangahy mpanakarena mba tsy hampandihy ilay ondrilahy.
Nihomehy fatratra hono ilay mpanakarena ka hoy izy: adala lahy ramatoa iny ondy va ka handihy? Kanefa nanandrana ihany hono izy ka rehefa nandihy teo ilay ondry dia namoaka vola betsaka ka gaga izy. Nony tonga hono ilay ramatoa haka ny ondy dia ondrilahy hafa nitovy loko tamin’ilay ondry mahagaga no nomeny fa ilay ondry mahagaga kosa notazominy ho azy.
Rehefa nody ary ramatoa ka nahatsapa fa tsy namoaka vola intsony ity ondry dia lasa nilazalaza ny zava-nitranga tamin-drangahy vadiny.
Dia lasa vao maraina indray tahaka ny teo aloha hono rangahy nanazava ny zava-nisy tamin’ilay hazo mahagaga. Tahaka ny teo ihany koa hono dia nomeny kibay iray rangahy sady nolazainy fa mahagaga ilay kibay.
Tahaka ny fanaony teo aloha ihany koa hono rangahy dia nampandihy ilay kibay teny an-dalana. Dia nitsangana hono ilay kibay ka nandihy ka nivelively ilay rangahy ka nalemilemy tsy afa-nihetsika intsony vao navelany.
Dia lasa nody hono rangahy ka nanome ity kibay ny vadiny. Naka ny kibay ihany koa hono ramatoa vadiny rehefa nitsofoka tao an-trano anefa hono ramatoa dia nidin-drangahy ny trano ka inona moa fa tsy nalemilemy teo koa ramatoa vadiny vao navelan’ilay kibay.
Rehefa tonga saina hono ramatoa vadiny dia nalain-drangahy ilay kibay ka nentiny ilay kibay mba halamaina tany amin’ilay mpandrafitra. Rehefa nifanaraka teo hono rangahy sy ilay mpandrafitra dia lasa rangahy sady nandrara fatratratra ilay mpandrafitra tsy hampandihy ilay kibay. Zatra ny teo anefa hono ity farany ka nampandihy ilay kibay ka rehefa voavelively teo ny vatany manontolo vao nijanona tsy nively intsony ilay kibay mahagaga.
Rehefa tonga ary hono rangahy haka ilay kibay dia nifona taminy ilay mpandrafitra sady namerina taminy ilay sahafa mahagaga sy ilay kibay.
Dia toy izany ihany koa hono tany amin’ilay mpanakarena fa rehefa nofitahin-drangahy teo ilay mpanakarena ka nampiasa ilay kibay dia nifona fatratra ka nanome ilay ondry mahagaga.
Dia nanomboka teo hono dia tonga mpanakarena fatratra izy mivady
Angano, angano ,arira arira.
#1 12/04/2016 13:59:11
dia Adama sy Eva faharoa koa izy mivady, ny tena vaha olana amin'ity dia divorce amin'ny ilay ramatoa no tokony atao fa tsy ilay hazo be no hitarainana , satria fahadisoan'ilay ramatao no be indrindrindra